Android အကြံပြုချက် Androidsis
Android ပေါ်က developer ရွေးချယ်မှုတွေကိုဘယ်လိုသက်ဝင်နိုင်မလဲ
ကျနော်တို့ကဆက်လက် #AndroidCheats နှင့်အထူးသဖြင့်ယနေ့ငါ Android အတွက်တစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာတ ဦး တည်းတင်ပြသို့မဟုတ်ရှင်းပြချင်တယ် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် operating system ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆော့ဝဲလ်များ၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဗားရှင်းအားလုံးတွင်ရရှိနိုင်ပြီး၎င်းတို့အားလုံးသည်အမြင်အားဖြင့်ဝှက်ထားခြင်းခံရသည်။
ဒီ option ကိုကျနော်တို့ enable လုပ်မယ့်, developer ရွေးချယ်စရာသူသည် feature developer များနှင့် system developer များသာမက Android app ဖန်တီးသူများအတွက်ပါကောင်းမွန်သော settings များပါ ၀ င်သည် USB debugging လိုကိရိယာများ ဥပမာ Rom ကိုပြောင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal ကို flash လုပ်ရန်လိုအပ်သည် root လုပ်ပါ.
ဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းပေါ်ရှိရှင်းလင်းဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွင်သင်မည်သို့တွေ့နိုင်သနည်း။ developer ရွေးချယ်စရာကို enable ကျွန်ုပ်တို့၏ Androids အပေါ်လုံးဝရှုပ်ထွေးသည်မဟုတ်နှင့်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်ထားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏ settings ကို, ကိရိယာသတင်းအချက်အလက် option ကိုဆင်းသွားနှင့် တတန်းထဲမှာခုနစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ ၏ option ကိုအတွက် နံပါတ်တည်ဆောက်.
မွေးဖွားခြင်း၌ဤငါတို့ setting ထဲမှာအသစ်တခု menu ကို enable ပါလိမ့်မယ်, အရာပထမ ဦး ဆုံးကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအနေဖြင့်, ဝှက်ထားရှိနေဆဲဖြစ်သည် USB debugging ကို enable လုပ်ပါကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ animation များကိုနှေးကွေးစေခြင်း၊ screen developer သို့မဟုတ် system developer များအတွက်အခြားအထူးအင်္ဂါရပ်များကိုထိသောအခါ keystrok များကိုပြပါ။
ဤဖွင့်ထားသည့်မီနူးအသစ်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မသိသောရွေးစရာများသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြောစရာမလိုပါ။ သူတို့မထိတာကပိုကောင်းတယ် ကျနော်တို့ဖန်တီးနိုင်ကတည်းက စနစ်နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါဒီတော့ developer ရွေးချယ်စရာများရှိဤမီနူးရှိမည်သည့်ရွေးချယ်စရာကိုမဆိုမလုပ်မီအွန်လိုင်းပေါ်တွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သင်ရှာလိုလျှင် ဤကဲ့သို့သောများစွာသောနောက်ထပ်အကြံပေးချက်များ, လျှောက်လွှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, terminal ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း သို့မဟုတ်ဘာစီလိုနာတွင်ကျင်းပခဲ့သော MWC14 တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအစီရင်ခံစာများကဲ့သို့သောအစီရင်ခံစာများသည်ရပ်တန့်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါ Androidsis You Tube ရုပ်သံလိုင်း ပြီးတော့သင်မြင်ရတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သင့်သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုလမ်းပြပေးဖို့အကြံပေးပါ ချန်နယ်မှစာရင်းသွင်းပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android ပေါ်က developer ရွေးချယ်မှုတွေကိုဘယ်လိုသက်ဝင်နိုင်မလဲ
Android ၏စစ်မှန်သောပုံပြင် - Android 4.4 Kit Kat (2013) ကိုရောက်ရှိခြင်း
ဂူဂဲလ်ကင်မရာ - မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံများရိုက်နည်း